Ikhaya / Blog / La magumbi okuhlambela nawo aXabiso liphezulu, Ngaba uwabonile onke?
2021 / 04 / 21 uhleloBlog 5261 0
Igumbi lokuhlambela yindawo esihlala siyichukumisa yonke imihla, kunye nokucoceka kwayo, ukugcinwa kwayo kunye nolungelelwaniso lwayo, kunye nokudalwa komoya ohambelana nazo zonke iinkcukacha zomniniyo. Emva koyilo olukumgangatho ophezulu wegumbi lokuhlambela, kufanele ukuba kufihlwe umphefumlo ocekeceke. Kodwa indlela endala yokuhamba ngepavile, ngokuqinisekileyo yenza ukuba abantu bazive bekruqula. Namhlanje sabelana ngezinye zeendlela ezihamba phambili, ngakumbi ezikhethekileyo zokwenza iithayile ukwenza amanqaku aphezulu ekuhombiseni kwekhaya!
Zombini iifashoni kunye nokubuyela umva kwethayile yentyatyambo, ngokuqinisekileyo kunokuba sisixhobo esingaphakathi ekubambeni amehlo. Imibala eqaqambileyo, iipateni, ukwakhiwa kutsala amehlo kakhulu. Nokuba ungasemva kwendawo yokubonisa, okanye indawo encinci yokuhombisa kwendawo, unokufumana isivuno esingalindelwanga, ukuze isitayile sokuhlambela siphuculwe ngesiquphe.
Ikholaji yesikwere yakudala
Ithayile ihamba phakathi kwemithetho, ukuzisa imeko yolungelelwano. Imigca ecocekileyo, iithoni ezilula neziqaqambileyo, kunye netayile yesikwere ngokwayo inika imvakalelo yokuphakama, inika abantu amava angenakuthelekiswa nanto.
Ukuba ufuna ukwaphula ucoceko kunye nokucoceka kwengqondo yokuthintela, ungasebenzisa utshintsho lomgca olufihlakeleyo, olufana ne-I-beam ukukhulisa ubuhle kwaye ubonakalise izendlawu ezimileyo.
Udonga olufanayo lombala kunye neethayile zomgangatho
Uhlobo oluhambelanayo lomgangatho kunye neethayile zodonga zinokusebenza njengolwandiso olubonakalayo, olwenza ukuba isithuba sibonakale siphangalele ngakumbi, singenanto kwaye sinamandla opheleleyo.
Udonga olunemibala eyahlukeneyo kunye neethayile zomgangatho
Iithoni ezahlukeneyo kunye nezitayile zodonga kunye neethayile zomgangatho zilungele ngakumbi ukudala ubutyebi besikhundla. Ngeli xesha lokuthetha okungafaniyo, okungahambelaniyo, ubunyani, ukufezekisa uyilo lwendawo engaqhelekanga.
Ngaphambili :: Kutheni le nto amagumbi okuhlambela abanye abantu ehlala ekhangeleka emhle kangaka? next: Yehlabathi Lokuqala! Indawo yokuHlala ebhafini eKhuselekileyo neLuncedo, ukuze “Uzihlambe” kwindawo yakho
2021 / 04 / 22 3679
2021 / 04 / 12 7030